Maxaa Ku Soo Kordhay: Sheekada Olivier Giroud, Taageerayaasha Reds Oo Ku Kacay Jurgen Klopp Iyo Xaalada Ozil
Home Maxaa ku soo kordhay Maxaa ku soo kordhay: Sheekada Olivier giroud, Taageerayaasha Reds oo ku kacay...
ku soo dhawaada xubinta maxaa ku soo kordhay oo aan ku eegno Xaalada iyo Wararka ugu hadalheynta Badan ciyaaraha ee Suuqa ama khilaafka markaasi ka dhex-taagan kooxaha.
Maxaa ku soo kordhay?
Taageerayaasha Liverpool Vs Jurgen Klopp
Macalinka kooxda Liverpool ayaa dhawaan ka dhawaajiyay in kooxda aysan ahmiyad siineynin suuqa kala iibsiga marka ay timaado ciyaarhano cusub hadalka macalinka ayaana ku soo aaday xili kooxda dhibaato ka heesato dhanka daafaca madama daafacyada ugu muhiimsan ay dhaawac ku maqanyihiin.
Taageerayaasha Kooxda ayaa ka falceliyay sheekada Macalinka Klopp Waxana niyad jab ka muujiyeen go’anka Tabaraha ee ku aadan suuqa iyagoo sidoo kale ku tilmaamay niyad jab aad u xun guud ahaan jamaahiirta ayaa ka mideysnaa sida ay uga soo horjeedaan hadalka Macalinka kooxda.
Sheekada Xidiga Olivier giroud ee Kooxda Chelsea ayaa ah mid wali cago badan ku taagneyn waxana xidiga xiiseenaya kooxaha badan Sida Juventus iyo Ac-Milan isla saaka Kooxda West Ham ayaa codsi kasoo gudbisay helitaanka Xidigan Reer France.
Marka laga soo tago Xiisaha Kooxahan hadana waxay u badantahay in kooxda Chelsea ay heysato Giroud sababo dhoor ah sida baahida dhanka Weerarka ee kooxda heysata xiligan waxana maamulka kooxda badankooda isku raaceen in xidiga uusan bixin xagaagan taasi ayaana ah mida uu doonaya Giroud laftiisa.
Xaalada Ozil ee Suuqa waa mid markasta taagan ilaa inta uu xidigan si rasmi ah ugu biirrayo koox kale madama kooxda Arsenal ay albaabka u furtay bixitaankiisa isla markana durba uu bilaabay wada-hadalka kooxaha kale.
Maamulka kooxda Fenderbence ayaa maanta shaaciyay in xidigan dhawaan uu kusoo biiridoono kooxdooda isla markana wada hadalka badankiisa uu marayo meel gabo-gabo ah.
Maxaa ku soo kordhay kala soco Xaaladaha Cakiran ee ciyaaraha ka taagan
Previous articleLiiska: Afarta Xidiga ee ugu feecan Boos kasta Qaarada Yurub oo la Shaaciyay
Next articleChelsea oo isha ku heysa inay u dhaqaaqdo daafaca aadka looga qiimeeyo Ligue 1